किन हराउँछन् महिलाहरु मात्र ? | सहारा टाइम्स
Home » Main-News » किन हराउँछन् महिलाहरु मात्र ?
किन हराउँछन् महिलाहरु मात्र ?
चितवन, जेठ ६ गते । जिल्लामा विगत पाँच वर्षमा एक हजार तीन १४ जना हराएका छन् । जसमा सबैभन्दा बढी महिला रहेका छन् ।
महिला सात सय ५४ जना छन् भने चार सय ४५ जना बालबालिका र पुरुष एकसय १५ जना रहेका छन् । जसमध्ये हालसम्म चारसय १५ जना भेटिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले जनाएको छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनको महिला तथा बालबालिका कक्षमा रहेको पञ्चवर्षे तालिकालाई हेर्दा आर्थिक वर्ष २०६८÷०६९ देखि हालसम्म चितवनमा हराएपछि भेटिएकामध्ये महिला दुई सय २३, बालबालिका एक सय ६१ र पुरुष ३१ जना रहेका छन् । चितवनका प्रहरी प्रमुख वसन्तबहादुर कुँवरका अनुसार बालबालिका र महिलालाई मानव ओसारपसार र घरेलु कामदारका रुपमा बढी प्रयोग गर्ने भएकाले उनीहरु धेरै हराएका हुन् ।
यस्तै आव ०६८÷६९ मा दुईसय ११ जना, आव ०६९÷७० मा तीनसय १३ जना, आव ०७०÷७१ मा ३४८ जना र आव ०७१÷७२ मा दुईसय २२ जना हराएका छन् ।